AI - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Waxaa la saadaalinayaa in tobanka sano ee ugu dambeeya xogta cusub aysan abuuri doonin dad, laakiin ay soo saari doonaan dareemayaal iyo aalado, aalado gundhig leh oo ku xiran internetka-taleefannada gacanta, nalalka taraafikada, iskaanleyaasha MRI, shabakadaha tamarta casriga ah iyo nidaamyada warshadaha culus. .
Codsiga AI ee qaybaha kala duwan
Codsiyada AI aad bay ugu weyn yihiin qayb kasta ha ahaato daryeelka caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga, maaliyadda, sharciga ama saarka. In daryeelka caafimaadka qaybta, shirkadaha ayaa codsanaya barashada mashiinka si loo sameeyo baaritaan degdeg ah oo ka wanaagsan kan bini'aadamka. Sida IBM Watson, taasi waa tusaalaha ugu caansan ee AI ee ku jira daryeelka caafimaadka qaybta, fahma luqadda aadanaha oo si hufan uga jawaaba su'aalaha la weyddiiyo. Nidaamku wuxuu ka dhex raadiyaa xogta bukaanka kaydka xogta si uu u sameeyo aragti ka dibna dadka hortooda ku soo bandhigto. Sharadka ugu weyn ee AI waa dhimista kharashyada iyo hagaajinta natiijooyinka bukaanka. Chatbots, tusaale kale oo AI ah, waa barnaamij kombuyuutar ka caawiya macaamiisha iyaga oo ka jawaabaya su'aalahooda, ka caawinaya habka biilasha oo ka caawiya inay jadwal u sameeyaan ballamaha dabagalka ah. Dhanka waxbarashada, AI xitaa waxay bedeli lahayd macalimiinta, iyadoo si buuxda u beddesha hababka ay ardaydu wax u bartaan, ka caawinta inay wax bartaan oo fahmaan xawligooda. Qiimaynta tooska ah iyo natiijooyinka degdega ah waa meelo yar oo AI runtii ku caawin lahayd.
Ganacsiyada dhexdooda, si aad si wanaagsan ugu adeegto macaamiisha, barashada mashiinka Algorithms ayaa lagu dhex daray Analytics iyo goobaha CRM si ay u muujiyaan xogta. Chatbots ayaa lagu soo daray mareegaha si ay u siiyaan gargaar degdeg ah isticmaalayaasha. Sharci ahaan, qalabaynta waxay badbaadinaysaa wakhti iyo tamar habka sahaminta dukumeentiyada, taas oo aad uga daala bini'aadamka. Xog-ururintu waxa ay si fiican ugu qalabaysan tahay taxonomy iyo ontology ka caawin doona bilawga dhisitaanka su'aalo-iyo-jawaab kaaliyeyaasha kombayutarka waxaana loo diyaarin doonaa inay ka jawaabaan. Robot-yadu waxay ahaan lahaayeen kuwa safka hore kaga jira marka ay timaado saarka qaybta.
Dhinacyo badan oo sharciga iyo dhaqaalaha ah, saamaynta AI waxay faa'iido u lahayd sida ansaxnimada, xaqiijinta, xakamaynta iyo amniga. Nidaamka AI wuxuu si qoto dheer uga dhex muuqan doonaa nolosheena ha ahaato xakameynta qalabka wadnahaaga, baabuurkaaga ama nidaamka ganacsiga otomaatiga ah ama korantadaada korantada. Oo waxaan samayn lahaa wax kasta oo aan rabno inay sameeyaan. Laakiin sidoo kale waxaa jira dhinac nabdoon marka ay timaaddo hirgelinta AI iyo otomaatiga ku dhawaad ​​wax kasta oo aan adeegsanno ama aragno. Ka -hortagga tartan hub -burbur ah oo ka dhaca hubka madax -bannaan waa mid ka mid ah taas beddelkeed, su'aasha weyn ayaa ah maxaa dhacaya haddii nidaamka AI uu ka caqli badan yahay aadanaha dhammaan howlaha garashada? Taasi waxay khatar weyn u keeni doontaa aadanaha maxaa yeelay waxay mari doontaa is-hagaajin soo noqnoqota, taasoo dhalisa qarax sirdoon oo ka tagaya caqliga aadanaha oo aad uga dambeeya. Nidaamkan oo kale ayaa suuragal ah inuu gacan ka geysto ciribtirka saboolnimada, cudurka iyo dagaalka isagoo abuuraya farsamooyin cusub oo aad u caqli badan. Laakiin khubaro yar ayaa sidoo kale leh dareenkan inay yeelan karaan cawaaqib xun mustaqbalka. sirdoonka macmal Nidaamku si ulakac ah ama ulakac ah wuxuu u keeni karaa dhibaato weyn ilaa aan barano inaan la jaanqaadno yoolalka AI kuwayaga.